Antony 5 tsy azo ihodivirana tokony handeha hanao ski ambony any Japon
Home » Lahatsoratra farany farany » Hostpost » Antony 5 tsy azo ihodivirana tokony handeha hanao ski ambony any Japon
Ny fitsangatsanganana an-tsambo any Japon dia zavatra tokony hiaina farafaharatsiny farafaharatsiny eo amin'ny fiainany ireo mpitia fanatanjahantena ririnina. Ny ririnina any Japon dia mihoatra lavitra noho ny sary feno lanezy amin'ny Tendrombohitra Fuji sy sake ao an-trano.
Suisse, France, na Canada dia mety ho toa safidy mazava kokoa raha ny amin'ny toerana fitetezana ski, fa zavatra hafa fotsiny i Japon. Inona moa no mety hahafaly kokoa noho ny mitsoraka any amin'ny Tendrombohitra Fuji amin'ny vovoka lafatra indrindra hitanao hatrizay?
Raha tsy mino anay ianao dia ireto misy antony 5 tsy azo resena izay tokony hijerena an'i Japon ho toy ny toeran-tsambo manaraka.
Tsara ho an'ny manam-pahaizana sy ny vao manomboka
Japon dia manana trano fialofana 500 mahery, ary Hakuba Japan iray amin'izy ireo fotsiny. Fanampin'izany, oram-panala mihoatra noho ny any amin'ny firenena hafa izy, noho izany dia be ny tehezan-tendrombohitra ho an'ireo vao manomboka sy manam-pahaizana hanandrana.
Noho ny halon'ireo hantsana dia ho mora kokoa ho an'ny vao manomboka ny mianatra noho ny amin'ny ranomandry mafy. Fanampin'izay, ho lavo tsy tambo isaina ianao, midika izany fa ho faly ianao fa hisy ny fitsangantsanganana malefaka miandry.
Ny manam-pahaizana dia hahita ny tehezan'i Japoney ho iray amin'ireo zavatra nampientanentana indrindra nanandrana azy ireo, natambatra tamin'ny fomba fijery mahatalanjona hamita ny zavatra niainany.
Hanandrana ny sasany amin'ireo malaza Japow
Raha tena mpanafika vovo-tany ianao, dia fantatrao ny momba ilay vovo-tany Japoney ratsy laza, na Japow, araka ny fiantsoan'ny sasany azy.
Samy mitady karazan-javatra mitovy na ny mpanao ski na ny mpanao ranomandry, rehefa mandinika ny tehezan-tendrombohitra: mba ho maina sy lalina ny lanezy. Fantatra fa manana ny oram-panala maina indrindra any Japon i Japan. Fifangaroana hazavana sy maina ary mavesatra fotsiny, izay mifangaro tanteraka, izay midika fa ho lalina lalindalina izy io.
Onsen apres-ski no fitsaboana farany
Raha mbola tsy resy lahatra ianao maninona ianao no tokony hanao ski any Japon, dia angamba hanova ny eritreritrao ny safidy apres-ski. Satria manana volkano marobe i Japana, midika koa izy io fa misy loharano mafana koa. Ireo loharano mahagaga ireo dia tsy vitan'ny mahafinaritra, fa tena tsara amin'ny fahasalamanao ihany koa, noho izany dia manana antony maro hafa hanandramana azy ireo ianao.
Ny toeram-pialan-tsasatra tsirairay dia misy mpizahatany lohataona mafana 1 farafahakeliny afaka mitsidika, ary matokia anay rehefa lazainay fa izy ireo ihany no ilainao aorian'ny fanaovana ski ambony iray andro. Ireo loharano mafana ireo dia fantatra amin'ny fomba mahazatra amin'ny onsen, ary izy ireo no fitsaboana tsara indrindra ho an'ny hozatra marary.
Fetin'ny lanezy mahafinaritra
Tian'ireo vahoaka Japoney ny fetiny ary mitady izay fotoana mety hanipazana azy ireo izy ireo. Ny fetin'ny oram-panala dia malaza be any Japon ary mety ho traikefa tsy manam-paharoa. Raha heverinao fa ny felana serizy amin'ny lohataona no fahitana mahavariana indrindra hitanao any Japon, miandry fotsiny ny hanatrika festival amin'ny ririnina.
Iray amin'ireo festival ririnina malaza indrindra mitranga any Sapporo, ary fantatry ny sary sokitra mangatsiaka mahatalanjona izay omanin'ireo mpanakanto eran-tany isan-taona, ao anatin'izany ireo ekipa mandray anjara amin'ny fifaninanana International Snow Sculpture Contest.